किन मेटामा बेटा ब्लकरहरू र थाइरोइड औषधीहरू लोकप्रिय छन्? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी समाचार, कल्याण समुदाय, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण स्वास्थ्य भारी खेल कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट घरपालुवा जनावर
मुख्य >> कम्पनी >> मेमा सिंगलकेयरमा सबैभन्दा लोकप्रिय औषधीहरू
मेमा सिंगलकेयरमा सबैभन्दा लोकप्रिय औषधीहरू
सामान्य वर्षमा, अप्रिलमा वर्षाले वसन्त फूलहरू ल्याउँदछ। सामान्यतया अन्तमा स sign्केत गर्दछ चिसो र फ्लू मौसम गरम तापक्रम, प्रशस्त घाम र, द्वारा बढेको धेरै प्राकृतिकभिटामिन डी। । यो वर्ष, क विश्वव्यापी माहामारी मौसममा अवरोध आएको छ। दम औषधि, मास्क, र सम्भाव्यतामा रनले एलर्जी औषधीको बिक्रीहरू प्रतिस्थापन गर्दैछ COVID-19 को लागी उपचार । राम्रो मौसमको बावजुद, संयुक्त राज्य अमेरिका भरिका व्यक्तिहरू भित्र बसिरहेका छन् र ठाउँमा शरण गरिरहेका छन्। यो दैनिक जीवन, खरिद बानी, र पर्चा प्रयोग परिवर्तन भएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा, महिनाको दौडान हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय प्रिस्क्रिप्सन ग्रीष्मकालको लागि अनौपचारिक किक अफको लागि अग्रणी ऐतिहासिक रूपमा बीटा ब्लकरहरू र थाइरोइड औषधीहरू छन्। हाम्रो लागी यी औषधिहरूले मेमा शीर्ष स्थानहरू लिन्छन्:
लेवोथिरोक्साइन (जेनेरिक Synthroid), एक थाइरोइड एजेन्ट
मेट्रोप्रोल (सामान्य Lopressor), एक बीटा अवरोधक
Carvedilol (सामान्य Coreg), एक बीटा अवरोधक
आर्मर थाइरोइड (ब्रान्ड नाम थाइरोइड हार्मोन), एक थाइरोइड एजेन्ट
Atenolol (जेनेरिक टेनोर्मिन), बिटा ब्लकर
बीटा ब्लकरहरू खास गरी उच्च रक्तचाप कम गर्नका लागि हो भन्छन् डॉन शिल, Pharm.D। , अलास्काको एch्कोरेजमा वेटरन अफरस हेल्थकेयर सिस्टमको लागि फार्मासिष्ट, विशेषज्ञताएन्टिकोआगुलेसन र कलेजो रोग। तर उनीहरूसँग धेरै फरक प्रकारका कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। केहि मुटुको विफलताका लागि छनौट हुन्छन्, केहि कांप वा चिन्ताको लागि। यी नुस्खाले बिभिन्न उद्देश्यहरू पूरा गर्न सक्दछ, यद्यपि मुटुको स्वास्थ्य र रक्तचाप कायम राख्ने यसको मुख्य प्रयोगहरू हुन्।
बीटा ब्लकरहरू यति परिचित छन् किनकि उनीहरू हार्मोन एपिनेफ्रिन, वा एड्रेनालाईनले सिर्जना प्रभावहरू रोक्छन्। यसले बिरामीको मुटुको धड्कन धीमा गर्न र रक्तचाप कम गर्न अनुमति दिन्छ।
को रोग नियन्त्रणको लागि केन्द्रहरू (CDC) रिपोर्ट गर्दछ कि संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै वयस्क को आधा उच्च रक्तचाप छ, अन्यथा उच्च रक्तचाप भनेर चिनिन्छ - जो केहि लोकप्रियता को लागी खाता हुन सक्छ। उपचार नगरेकोले यसले तपाईंलाई हृदयघात र स्ट्रोकको लागि जोखिममा पार्छ, मृत्युको दुई प्रमुख कारणहरू। त्यसोभए यदि तपाई उच्च रक्तचापको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्नुभएन भने, समय आयो।
मेट्रोप्रोल किन लोकप्रिय छ?
मेट्रोपोलोल एकलकेयरमा पहिरोबाट सबैभन्दा लोकप्रिय बिटा ब्लकर हो। यो हृदय विफलताको लागि सबैभन्दा राम्रो अध्ययन गरिएको छ र दुबै संकेत हृदय विफलता र रक्तचाप दुबैको लागि हो, त्यसैले यो प्राय जसो सिफारिस गरिएको हुन्छ, डा। शिल बताउँदछन्।
सम्बन्धित: बिटा ब्लकर भनेको के हो?
यस अनुसार अमेरिकी थाइरोइड संघ (एटीए), अनुमानित २० करोड अमेरिकीहरू लाई थाइरोइड रोगको कुनै प्रकार छ। त्यो धेरै व्यक्ति हो जसलाई थाइरोइड औषधि आवश्यक पर्दछ। यस नम्बरमा हाइपोथायरायडिज्म (एक अण्डरेटिभ थाइरोइड) को साथसाथै Hyperthyroidism (एक ओभरएक्टिव थाइरोइड) को व्यवहार गर्ने मानिसहरु सामेल छन्।
थाइरोइड ड्रग्स थाईरोइड स्थितिको लागि प्रयोग गरिन्छ सहित हाइपोथायरायडिज्म र हाशिमोटोको भन्छ Inna Lukyanovsky , Pharm.D।, एक कार्यात्मक औषधी व्यवसायी, पेट स्वास्थ्य विशेषज्ञ, र लेखक पाचन रीसेट।
हाशिमोटोको रोग वास्तवमा हाइपोथायरायडिज्मको सबैभन्दा सामान्य कारण हो। यो एक स्वचालित प्रतिरक्षा अवस्था हो जसले एक व्यक्तिको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई थाइरोइडमा हमला गर्दछ। हाइपोथायरायडिज्मका अन्य कारणहरूमा हाइपरथायरायडिज्म, थाइरोइड सर्जरी, विकिरण थेरापी, वा विभिन्न औषधीहरूको उपचारको लागि ओभर-प्रतिक्रिया समावेश हुन सक्छ लिथियम ।
बाँकी उपचार नगरी, हाइपोथायरायडिज्मले थकान, कब्ज, वजन, मांसपेशि कमजोरी, डिप्रेसन, र बिग्रिएको मेमोरीका कारण अन्य चीजहरू निम्त्याउन सक्छ। तर एटीए भन्छ कि up०% सम्म थाइरोइड सर्तहरू भएको मानिस थाईरोइडको खराबी हो भनेर पनि सचेत हुँदैन। यदि तपाईंले माथिका कुनै पनि लक्षणहरू अनुभव गर्नुभएको छ भने, तपाईं थाइरोइड स्तर जाँच गर्न तपाईंको चिकित्सकलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं थाइरोइड एजेन्ट लिइरहनुभएको छ तर अझ राम्ररी महसुस गरिरहनु भएको छैन भने तपाईं आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
लेभोथिरोक्साइन किन लोकप्रिय छ?
सिन्थ्रोइडको जेनेरिक लेवोथिरोक्साइन, एकलकेयरमा सबैभन्दा लोकप्रिय रूपमा निर्धारित थायरोइड एजेन्ट हो। अधिकांश समय जेनेरिक औषधिहरू वर्गमा सबै भन्दा बढी निर्धारित हुन्छन् किनभने लागत प्रभावकारिता र अधिक क्लिनिकल अनुसन्धानका कारण डा। लुक्यानोव्स्की बताउँदछन्। लेभोथिरोक्साइनको मामलामा, यससँग अन्य सिन्थ्रोइड जेनेरिकहरूको तुलनामा राम्रो क्लिनिकल डाटा पनि छ।
सम्बन्धित: हाइपोथायरायडिज्म उपचार र औषधि
किन बीटा ब्लकरहरू र थाइरोइड एजेन्टहरू मेमा लोकप्रिय छन्?
हो, यी औषधिहरूले दुई धेरै सामान्य अवस्थाको उपचार गर्दछ। तर तिनीहरू किन मे मा यती लोकप्रिय छन्? डा। शिलले अनुमान गरे कि जाडो चिसो र फ्लूको मौसम बढ्नका लागि जिम्मेवार छ। अर्थ, त्यहाँ एन्टिबायोटिक र केही अन्य औषधीहरूको भर्नेमा कमी छ जुन अधिक मौसमी लोकप्रियता प्रदर्शन गर्न सक्दछ। अन्यथा, उनले औंल्याए कि यी दुबै औषधीहरू दीर्घकालीन पर्चेमा पर्दछन् र यी दुवै अवस्था वास्तवमै वर्षको कुनै पनि समयमा खराब हुँदैनन्।
डा। लुक्यानोव्स्कीले सोचे कि वर्षको यस समयमा भर्ने बृद्धिले मेटाबोलिक परिवर्तनसँग केहि गर्न सक्दछ। मौसम परिवर्तन, प्रतिरक्षा प्रणाली परिवर्तन, तापमान परिवर्तन र विशेष गरी अब नयाँ वसन्त seasonतुको साथ मेटाबोलिक परिवर्तनका कारण केही औषधीहरूमा मौसमी वृद्धि सामान्य छ, डा। लुकायनोव्स्की बताउँदछन्। यसैले तपाईले औषधीहरूको वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ जुन अन्तःस्रावी सम्बन्धित (मेटाबोलिक परिवर्तन) सम्बन्धित हुन्छन्।
सम्बन्धित: Things चीजहरू जुन तपाईंको थाइरोइड औषधिसँग गडबड गर्न सक्दछन्
कारण जेसुकै भए पनि, दुबै बीटा ब्लकरहरू र थाइरोइड एजेन्टहरूले वर्षभरि जीवनमा सुधार गर्ने र बचाउने क्षमता राख्छन्। यदि तपाईंलाई यी औषधीहरू दिइएको छ भने, सही स्वास्थ्य पत्ता लगाउनको लागि तपाईंको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकसँग काम गर्नुहोस्, र तिनीहरूलाई लिईरहनुहोस्, अन्यथा चिकित्सकले सल्लाह नगरेसम्म।
Afrin मा सक्रिय संघटक के हो
आँखा स्वास्थ्य १०१: कसरी दृष्टि जोगाउने र तपाईंको आँखा स्वस्थ राख्न
cefdinir 300 mg के उपचार को लागी प्रयोग गरिन्छ?
मुटु रोग बाट कति मानिस मरे
जो राम्रो वियाग्रा cialis वा levitra छ
म कसरी पुरानो औषधि हटाउने?
यसको मतलब के हो यदि तपाइँको tsh कम छ
के तपाइँ बिहान singulair लिन सक्नुहुन्छ?